Engine Fault Sifo kuvamise amagalaji ezithinta abasebenzi abaqeqeshiwe futhi imishini, okwazi ukusebenza. izimoto Modern kufanele ihlonzwe kuphela emotweni izikhungo zokunakekela yasekuqaleni, njengoba ubuchwepheshe ukuze bonke brand ziyahlukahluka. Yiqiniso, zikhona izikhungo jikelele, okuyinto eqinisekisiwe yizimboni ahlukahlukene. Lesi sitifiketi kuqinisekisa isikhungo zamakhono emkhakheni amasevisi wedatha.
Imishini enjalo ngokuvamile kuwufanele imali eningi, futhi ekuqukethe azinakwenzeka ngoba iziteshi ezincane, ngakho izinga lenkonzo abakwazi ukhathazeke.
Ukuxilonga of eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa injini kungaba ishibhile. Lokhu kungafezwa ngokumane usebenzisa keenness kwengqondo yakhe. Ukuthumela emotweni kusevisi kumelwe kwandulelwe injini uphethwe elula amakhandlela, bona pretty okuningi anganika isimo imoto.
Kungakhathaliseki ukuthi nzima injini yemoto, kungakhathaliseki ukuthi singakanani abazange ukuphatha electronics, anakho izingxenye zemoto eziye igugile impahla. Lokhu ukuwohloka kwamangqamuzana futhi bungabonakala umbala amakhandlela. Khumbula ukuthi le ndlela iyasebenza kuphela uphethiloli izinjini, diesel, futhi ngoba nje kanti akunjalo.
Asiqale nge okubi kakhulu - ezifakwa carbon ku plugs inhlansi. Uma kukhona okubonisa enjalo ekhona, kanye kungabonwa, namafutha ukusetshenziswa, futhi ngakhula petrol. Ngaphezu kwalokho, injini iyoba Smoky okuningi. Konke lokhu kukhomba bafake of piston iqembu ngesimo piston izindandatho valve stem lwezimpawu. Amafutha nje ungena egumbini amandla omlilo. Cishe akufanele ukhulume indlela yokulungisa.
Engine iphutha uphethwe kungembula nje izinkinga ezikhona kakade, kodwa futhi "iziqalo", okuyinto ke kuyinkinga enkulu. Kwenzeka ukuthi kukhona umule phezu Imigudu. Wabuye abamnyama, kodwa kulula ukugeza. Kulokhu-ke kubalulekile ukuba ulungise carburetor noma uhlole futhi, uma kunesidingo, esikhundleni salo. Inkinga lapha wukuthi ingxube fuel pereobogaschena uphethiloli, okuholela sooting kuwo wonke evele ekamelweni amandla omlilo. Ngemva kokulungiswa, kuyinto efiselekayo ukuqinisekisa ukulungisa nokuvumela injini ngesivinini medium and okusezingeni eliphezulu.
Phakathi kwezinye izinto, ukuhlola of eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa injini kwenza kube nokwenzeka ukwandisa ukuphila inkonzo yayo, kusukela akuwona wonke amaphutha ngokushesha ngokuthini iyunithi aphume wokusebenza. Ngikanye namalungu athile izinjini ingaqalisa ngezinyawo amakhilomitha 10,000, bese "iphumele esigxotsheni." Leso simo kungaba inhlekelele kuzo zonke umshayeli.
Ngezinye izikhathi, umphumela okuphambene lapho uphethiloli e ingxube akusho suffice. Khona-ke injini kunzima ukuqala. On vykruchennoy ikhandlela kungabonwa ifilimu emhlophe. Isixazululo sale nkinga, ngendlela efanayo njengoba odlule.
injini ukuhlola kanye nokulungisa kungaba kwenziwe ekhaya, kodwa lokhu kudinga iqoqo okuqinile amathuluzi, kanye isikhathi esanele nomzamo. Ungagxambukeli, nolwazi kule nsimu. Uma kukhona ukungabi nethemba amakhono abo, kubalulekile ukuya esiteshini yesondlo.
Mercedes C63 AMG - ngalabo abathanda ijubane, Akekho osindayo imali ku amathayi nophethiloli
Amabhethri Lead-acid. Umgomo we operation
Mercedes ML 350. Umlando
"Sens Zaz": Abanikazi ukubuyekezwa, Ukucaciswa nezithombe
Imenyu ukuthola abancelisayo omama - indlela ukukhetha kwesokudla
Chest-X-ray ukuze wenze eMoscow imali, khulula ngokushesha. Amakheli kanye nezikhungo zezokwelapha
Aral Sea: inkinga enkulu global
Izimpawu hernia umgogodla
Februwari 4 - Usuku ekulwisaneni nomdlavuza. Yiziphi imisebenzi ngalolo suku?